One Championship မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်သွားမယ့် မြန်မာ့ပထမဆုံး MMA အမျိုးသမီး ဖိုက်တာ အန်တိုနီယာ - For her Myanmar
One Championship မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်သွားမယ့် မြန်မာ့ပထမဆုံး MMA အမျိုးသမီး ဖိုက်တာ အန်တိုနီယာ
အားပေးသင့်ပါတယ်ေ်နာ်.. မြန်မာမှန်ရင်ပေါ့.. 😛
ယောင်းတို့ရေ.. One Championship ဆိုတာကိုတော့ အောင်လအန်ဆန်းကို အကြောင်းပြုပြီး ကြားဖူးနေကြမှာပေါ့နော်.. ဒီနေ့ ကျင်းပမယ့် One Championship ပြိုင်ပွဲမှာ အောင်လအန်ဆန်းလိုပဲ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ အမျိုးသမီးအားကစားမယ် တစ်ယောက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ်ဆိုတာရော ယောင်းတို့ သိပြီးကြပြီလား??
သူ(မ)နာမည်ကတော့ အန်တိုနီယာလို့ ခေါ်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ.. အပြည့်အစုံဆိုရင်တော့ ဘိုဇီနာ အန်တိုနီယာပေါ့.. သူ(မ)က ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ ကယန်းတိုင်းရင်းသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကယန်းတိုင်းရင်းသူဆိုတာ ယောင်းတို့လည်း သိကြမှာပါ.. လည်ပင်းမှာ ကွင်းတွေ အများကြီးစွပ်တဲ့ ဓလေ့နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေလေ…
အန်တိုနီယာက သူမအသက် ၁၆နှစ်အရွယ်ကတည်းက ကိုယ်ခံပညာ သိုင်းပေါင်းစုံ ပညာရပ်တွေကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်တဲ့… အသက် ၂၃ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ သူ(မ)ဟာ ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းက ဘောလုံးအသင်းမှာပါတယ်လို့ အိမ်ကို ပြောပြီး တကယ်တမ်းတော့ သူ(မ) ဝါသနာပါရာ၊ စိတ်အားထက်သန်ရာ လက်ဝှေ့ကိုသာ စွမ်းစွမ်းတမံ လေ့ကျင့်သင်ယူခဲ့ပါတယ်။
Related Article >>>>>တစ်အုပ်ဆို ဆိုသလောက် ခံစားမှုရသတွေ ထင်ကျန်နေစေတဲ့ ကလောင်သွားပိုင်ရှင် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး
မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ထားတဲ့ အန်တိုနီယာဟာ MMA လောကကို ဝင်လာတာက ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလမှပါ။ ပထမဆုံး ပြိုင်ပွဲမှာပဲ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားကို ၂၄စက္ကန့်အတွင်း အလဲထိုးနိုင်ခဲ့တာမို့ အမျိုးသမီး One Championship ပြိုင်ပွဲမှာ ပွဲသိမ်းအမြန်ဆုံး ပွဲစဉ်အနေနဲ့ မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ (မြန်မာ့အားကစားသမားများသည် အချဉ်တော့မဟုတ် 😛 )
အဲ.. ဒီပြိုင်ပွဲပြီးလို့ နောက် စက်တင်ဘာမှာတော့ Rika “Tiny Doll” Ishige နဲ့ ထိုင်းမှာ ထိုးသတ်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံး အချီမှာတည်းက ဒိုင်ပွဲရပ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ MMA လောကမှာ အတွေ့အကြုံနုနေသေးတာမို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပေမဲ့ သူ(မ)က ဆက်ပြီးကြိုးစားဦးမယ်၊ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ သူ(မ) လုပ်နိုင်ဦးမယ်လို့လည်း သူ(မ) ယုံကြည်နေပါတယ်။
ဒီညကတော့ သူ(မ)ရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ သူ(မ)ရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကို သက်သေပြဖို့ အခွင့်ကောင်းပါပဲ.. ဒီနေ့ (၈.၃.၂၀၁၉) မှာ ကျင်းပမယ့် One Championship မှာ သူ(မ)နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ရမယ့်သူကတော့ မလေးရှားနိုင်ငံမှ Audrey Laura Boniface ဖြစ်ပါတယ်။ သုဝဏ္ဏမိုးလုံလေလုံ အားကစားကွင်းမှာ ကျင်းပမယ့် ဒီပွဲကို ညနေ ၆နာရီကတည်းက စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
Related Article>>>>>>မိန်းကလေးဖြစ်နေလို့ အလျှော့ပေးရမယ်တဲ့လား
လက်မှတ်တွေကိုတော့ ဒီ လင့်ခ် >>> http://bit.ly/onevalor19 လေးမှာ ဝယ်လို့ရပါတယ်နော်…
ကဲ… ကိုယ်တွေ အတူတူ အားပေးလိုက်ကြရအောင်လား…
References : Bozhena Antoniyar , The Myanmar Times , One Championship
အားပေးသငျ့ပါတယျေနျာ.. မွနျမာမှနျရငျပေါ့.. 😛
ယောငျးတို့ရေ.. One Championship ဆိုတာကိုတော့ အောငျလအနျဆနျးကို အကွောငျးပွုပွီး ကွားဖူးနကွေမှာပေါ့နျော.. ဒီနေ့ ကငျြးပမယျ့ One Championship ပွိုငျပှဲမှာ အောငျလအနျဆနျးလိုပဲ မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျပေးနတေဲ့ အမြိုးသမီးအားကစားမယျ တဈယောကျ ပါဝငျယှဉျပွိုငျမယျဆိုတာရော ယောငျးတို့ သိပွီးကွပွီလား??
သူ(မ)နာမညျကတော့ အနျတိုနီယာလို့ ချေါပါတယျ ယောငျးတို့ရေ.. အပွညျ့အစုံဆိုရငျတော့ ဘိုဇီနာ အနျတိုနီယာပေါ့.. သူ(မ)က ကယားပွညျနယျ၊ လှိုငျကျောမွို့မှာ နထေိုငျတဲ့ ကယနျးတိုငျးရငျးသူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကယနျးတိုငျးရငျးသူဆိုတာ ယောငျးတို့လညျး သိကွမှာပါ.. လညျပငျးမှာ ကှငျးတှေ အမြားကွီးစှပျတဲ့ ဓလနေဲ့ တိုငျးရငျးသားတှလေေ…
အနျတိုနီယာက သူမအသကျ ၁၆နှဈအရှယျကတညျးက ကိုယျခံပညာ သိုငျးပေါငျးစုံ ပညာရပျတှကေို လလေ့ာခဲ့ပါတယျတဲ့… အသကျ ၂၃ နှဈရှိပွီ ဖွဈတဲ့ သူ(မ)ဟာ ငယျငယျတုနျးကတညျးက ဘောလုံးအသငျးမှာပါတယျလို့ အိမျကို ပွောပွီး တကယျတမျးတော့ သူ(မ) ဝါသနာပါရာ၊ စိတျအားထကျသနျရာ လကျဝှကေို့သာ စှမျးစှမျးတမံ လကေ့ငျြ့သငျယူခဲ့ပါတယျ။
Related Article >>>>>တဈအုပျဆို ဆိုသလောကျ ခံစားမှုရသတှေ ထငျကနျြနစေတေဲ့ ကလောငျသှားပိုငျရှငျ ဂြာနယျကြျောမမလေး
မွနျမာ့ရိုးရာ လကျဝှခေ့နျြပီယံ နှဈကွိမျ ဖွဈထားတဲ့ အနျတိုနီယာဟာ MMA လောကကို ဝငျလာတာက ၂၀၁၈ ဖဖေျောဝါရီလမှပါ။ ပထမဆုံး ပွိုငျပှဲမှာပဲ ပွိုငျဘကျကစားသမားကို ၂၄စက်ကနျ့အတှငျး အလဲထိုးနိုငျခဲ့တာမို့ အမြိုးသမီး One Championship ပွိုငျပှဲမှာ ပှဲသိမျအမွနျဆုံး ပှဲစဉျအနနေဲ့ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ (မွနျမာ့အားကစားသမားမြားသညျ အခဉျြတော့မဟုတျ 😛 )
အဲ.. ဒီပွိုငျပှဲပွီးလို့ နောကျ စကျတငျဘာမှာတော့ Rika “Tiny Doll” Ishige နဲ့ ထိုငျးမှာ ထိုးသတျခဲ့ပွီး ပထမဆုံး အခြီမှာတညျးက ဒိုငျပှဲရပျနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ရပါတယျ။ MMA လောကမှာ အတှအေ့ကွုံနုနသေေးတာမို့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ရပမေဲ့ သူ(မ)က ဆကျပွီးကွိုးစားဦးမယျ၊ ဒီထကျပိုပွီးတော့ သူ(မ) လုပျနိုငျဦးမယျလို့လညျး သူ(မ) ယုံကွညျနပေါတယျ။
ဒီညကတော့ သူ(မ)ရဲ့ ယုံကွညျမှုနဲ့ သူ(မ)ရဲ့ ကွိုးစားမှုတှကေို သကျသပွေဖို့ အခှငျ့ကောငျးပါပဲ.. ဒီနေ့ (၈.၃.၂၀၁၉) မှာ ကငျြးပမယျ့ One Championship မှာ သူ(မ)နဲ့ ယှဉျပွိုငျထိုးသတျရမယျ့သူကတော့ မလေးရှားနိုငျငံမှ Audrey Laura Boniface ဖွဈပါတယျ။ သုဝဏ်ဏမိုးလုံလလေုံ အားကစားကှငျးမှာ ကငျြးပမယျ့ ဒီပှဲကို ညနေ ၆နာရီကတညျးက စောငျ့ကွညျ့နိုငျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
Related Article>>> မိနျးကလေးဖွဈနလေို့ အလြှော့ပေးရမယျတဲ့လား
လကျမှတျတှကေိုတော့ ဒီ လငျ့ချ >>> http://bit.ly/onevalor19 လေးမှာ ဝယျလို့ရပါတယျနျော… ကဲ… ကိုယျတှေ အတူတူ အားပေးလိုကျကွရအောငျလား…
Tags: Antoniyar, Bozhena, myanmar, News, Thuwunna, Women News